Kuchengetedzwa kwakanyanyisa | Ehupfumi Zvemari
Kuchengetedzwa kwakanyanya kuwedzerwa
Ikozvino pane mamwe masheya akanyanya kuwedzerwa. Izvi mukuita zvinoreva chimwe chinhu chakareruka sekuenda kuburikidza nenguva shoma umo simba rekutenga rakakura zvekuti mutengo unopfura kudzoka zvakare. kusawana vatengi venguva yemberi. Uye izvo zvave kuonekera mushure mekuzivisa kweyemabhizinesi mhedzisiro yekota yechipiri yegore rino uye kuti haina kugara chero chinhu zvakanaka nekukosheswa kwemasheya nevanoongorora zvemusika wemari. Kusvika padanho rekuti ivo vakarangwa mukati meiyo inosarudzika index yeSpanish equities
Kune rimwe divi, hazvigone kukanganwika izvo Eurostoxx 50 iyo yekutanga nharaunda yekutsigira ndeye 3.600 mapoinzi uye, sechinangwa, 3.700 mapoinzi. Mumamiriro ezvinhu mune zvimwe zvekuchengetedzeka kwaro zvakawandisa uye nekudaro vari panjodzi yekurasikirwa nechikamu chekukoshesa pamusika wemasheya. Iwo mabheti ekudyara ayo asingadiwe kuita sarudzo kubva zvino zvichienda mberi. Uye semhedzisiro yezviito izvi, isu tinofanirwa kuona kuti ndedzipi tsika idzi dzakakura zvakanyanya mumwedzi ichangopfuura kana kunyangwe makore. Muchirevo chakanyanya kuomarara kuita portfolio yekudyara iyo yakasimba kwazvo muzvinangwa zvayo.
Nepo kune rimwe divi, zvakakosha kuti uongorore kuti ichokwadi kuti mushure mekufara kana kwekutanga kutya, zvakajairika kuti iyo kukosha uwane donhwe kuti uwane uriri kuzembera. Mune ipi imwe yemafambiro anowanzoitika mune zvakanyanyisa kutengwa. Ndokunge, nhanho kubva pazvinzvimbo zvinokwanisa kudzoserwa kuti dzidzoke gare gare nemitengo yakasimba uye inokwikwidza iyo inogona kuunza mukana wakakura wekuongorora zvakare. Kubva kune chero mhando yenzvimbo dzekudyara uye marongero uye nechinangwa chimwe icho chisiri chimwe kunze kwekuita purofiti ine pundutso pamwe nezvivimbiso zvakakurisa zvekubudirira mukuita.
1 Kuchengetedzwa kwakanyanya: Iberdrola
2 More Nhare yakura zvakanyanya
3 Siemens nekusahadzika kunowanzoitika
4 Ferrovial chinangwa chemakambani ekuvaka
5 Acerinox munguva pfupi
Kuchengetedzwa kwakanyanya: Iberdrola
Kana parizvino paine kukosha kwakanyudzwa mune ino maitiro, iyoyo hapana mumwe kunze kwekambani yemagetsi iyi. Izvo zvakaitika mune pfupi pfupi nzvimbo yenguva kubva pa6 kusvika pa9 euros pamugove uye nekudzokororazve kweinosvika 32%. Iko ingave iri nguva yekutora purofiti uye kuenda kune kumwe kuchengetedzeka kana kunyangwe imwe mari yemari. Hazvishamisi kuti yatove kuratidza ekutanga zviratidzo zvekushaya simba izvo zvinogona kutungamira mune yekutanga chiitiko kumatanho e8,50 euros. Kubva kwainogona kuenda kumatanho ane mwero uye mukuita kumakwiriro akaitika mune gumi nesere euros.
Kune rimwe divi, zvinofanirwa kucherechedzwa kuti Iberdrola yakanyanyisa kutsetseka uye inofanirwa kuchinjika kune yekupa uye kudiwa kwezvikamu zvayo. Ichi chinhu chinogona kutungamira mukutanga kwezvakakosha kururamisa izvo zvinogona kukutorera zvakanyanya kudzika kubva pazvinzvimbo zvazvino mukugadziriswa kwemitengo yako. Sezvo chiri chokwadi chekuti kutengesa kumanikidza kwakatanga kuvaka uye kuti kunogona kushandiswa kutenga masheya nemitengo yakaderera. Kubva kune chero mhando yeruzivo rwekudyara uye izvo zvinogona kukurudzira vanoita mari kuti vabude munzvimbo dzeiyi kambani yemagetsi.
More Nhare yakura zvakanyanya
Teleco ndiyo kukosha kweIbex 35 iyo yakanyanya kufarira kubvira kutanga kwegore. Inounza kufarira mune mashandiro ari vanenge 40%, chikamu chidiki kwazvo chinowanikwa kumakambani akanyorwa mune yakasarudzika index yeSpanish equities. Ichi ndicho chimwe chezvikonzero chinoita kuti zvinyanye kushushikana nekugadziriswa kwemitengo, zvirinani kubva pa50% pakuwedzera kwemwedzi ichangopfuura. Nekuti zvinosuruvarisa, zvinogona kunonoka kupinda munzvimbo dzavo kubva zvino zvichienda mberi. Kunyangwe paine chokwadi chekuti yakatungamira kuwedzera kwehunhu hunoumba iyo Ibex 35.
Zvakare hazvigone kutongwa kunze kuti kumanikidzwa kwekutenga kumutengesi kuri kuenderera, kunyangwe paine mukana wekutarisa pamwe nemipimo yakawanda kupfuura nakare. Kubva pane ino mamiriro, haina kutongwa kunze kuti inokurumidza kumusoro kudhonza izvo zvino zvinotungamira pakucheka kwakakosha mumitengo yavo. Kunze kwechido icho kambani iyi yemafoni inogona kumutsa pakati pevashoma nepakati varimi. Iko imwe yekiyi ichave yekuti inogona kukunda kumwe kushomeka kwakakosha uko kukosha kuri pamberi payo uye ichave iyo poindi yechiitiko kuitira kuti zviito zvaro zvitungamirirwe munzira imwe kana imwe mumwedzi iri kuuya.
Siemens nekusahadzika kunowanzoitika
Mukati meiri boka rakasarudzwa, vatengesi havagone kukanganwa kukosha uku, kunyangwe rakarasikirwa nerimwe simba muzvikamu zvekutengesa zvenguva pfupi yapfuura. Chero zvazvingaitika, iyo Bankinter yekuongorora dhipatimendi inoratidza kuti yakanyorwa kambani ine kukwirira kuoneka mukutengesa, ine huwandu hwekuputira hwe90% pamusoro peiyo yakatarwa yepakati-renji yegore, asi inokodzera gore se "shanduko" maererano nerubatsiro. Kuona kuti makakatanwa ekutengeserana ndeimwe yezvinhu zvinotsanangudza zvishoma nezvokuwedzera kwemitengo muchitengeswa. Zvisinei nezvose, yakabata kupfuura kutenga, kunyangwe isingakwanise kukanganikwa kuti ndiyo imwe yetsika dzakasarudzika mune yakasarudzika indekisi yeSpanish equities.
Chero zvazvingaitika, ndechimwe chezvikumbiro zvakaomesesa mumisika yemari yenyika yekushanda. Chokwadi ichi chakakonzerwa nenyaya yekuti pazviitiko zvakawanda kusagadzikana kwakanyanyisa ine musiyano unooneka pakati pemitengo yayo yepamusoro neepasi. Uye kusvika padanho rekusvika pamatanho ari pamusoro pe5% kana kunyangwe akakwidziridzwa. Ndokureva, zvakanakira mashandiro ekutengesa, asi kwete kwekumisikidza yakachinjisa kana isingadzikame yekuchinjana kwepakati nepakati. Iko kwaunogona kuwana mari yakawanda kuburikidza nekufamba uku, asi nekuda kwezvikonzero zvakafanana, siya akawanda ma euro kumashure.
Ferrovial chinangwa chemakambani ekuvaka
Pakati pemakambani akanyorwa muchikamu chekuvaka, iyi ndiyo inochengetedza yakanyanya kutaurwa kumusoro, kunyanya mumwedzi ichangopfuura. Nemutengo wekutenga uri pamusoro wevamiriri veIbex 35. Mupfungwa iyi, zano rekudyara iro rinogona kushandiswa kubva ikozvino zvichienda tora mukana wekugadzirisa kutora zvinzvimbo mune kukosha, kunyangwe kubva munzira dzine hukasha. Nekuti kugona kwayo kuongororazve ndeimwe yeanonyanya kuratidza anoratidzwa neIbex 35 uye mune chero mamiriro ari pamusoro peaya anopiwa nemakambani ari muchikamu.
Chimwe chezvinhu zvakakosha kwazvo muchirongwa chekudyara ichi muSpanish equities ndechekuti chakakoshesa pasi pemadhijiti maviri kubvira kutanga kwegore. Nebatsiro parutivi mugove uyo unonyanya kuzivikanwa nevanoongorora vakuru vemisika yemari. Nekuda kwekuti inopa mitsara yakasiyanasiyana, zvese mumamodeli ayo uye munzvimbo dzenzvimbo kwavakasaina zvibvumirano zvebasa. Izvo, muchidimbu, sarudzo isingapi njodzi dzakanyanya kumwedzi iri kuuya, kunyanya kana ichifambidzana nemaitiro akanaka mumisika yemari. Pasina kutonga kunze kuti inogona kusvika kunyangwe akakwira huwandu kubva ikozvino
Acerinox munguva pfupi
Chinzvimbo chemugadziri wesimbi yeSpain chakati siyanei nekuti, kunyangwe hazvo maitiro ayo asina kunyanya kunaka, iri munguva pfupi. Iine mukana mukusimudza mitengo yayo iyo inogona kuve inonakidza kwazvo kune izvo zvinotarisirwa zvevashambadzi vadiki nepakati. Nepfungwa yakajairika yekuti mumavhiki mashoma inogona kusvika pamatanho e11 euros pamugove inova iyo ine yakasimba kwazvo kuramba. Chero zvazvingaitika, ichi hachisi kukosha kuve nacho kwenguva yakareba, asi zvinopesana ndezvekuita kwakatarwa uye izvo zvinodzorwa zvakanakisa pamberi pechingaitika mumisika yemari.
Uye zvakare, hazvigone kukanganwika kuti gore rino rakasimudza gohwo remugovano neinenge hafu yeperesenti poindi. Izvi zvinoreva mukuita tsika kuti iwe unogona kuwana yakatarwa uye yakavimbiswa liquidity gore rega uye chero chii chinoitika mumisika yemari. Kunyangwe usinga svike padanho remakambani emagetsi ayo anopa chiyero chekufarira chepfungwa iyi padhuze ne7%. Iko iri nzira yekuenda kune ma investments mukambani ino kubva kune yakanyanya chengetedza kana nzira yekudzivirira kupfuura mune mamwe ese eIbex 35. Mune imwe yenzvimbo dzinotenderera kupfuura dzose, ndiko kuti, zvinovakirwa pane zvinotarisirwa kuti vari kugadzira muhupfumi hwenyika dzese. Uye nekuda kweichi chikonzero ivo vanonyanya kugadzikana kupfuura vamwe vese, kunyanya munguva dzisingafadzi dzekirasi ino yezvinhu zvakakosha zvemari. Uye icho ndicho chimwe chezvinangwa mukudyara.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Bolsa » Kuchengetedzwa kwakanyanya kuwedzerwa
Ndeipi zita rekambani
Kuisa mari mumusika weJapan wemusika: iyo Nikkei